Ireo daty sy toerana misy ny fankalazana - Lemur Conservation Network
Dihin’ny Varika Maneran-tany: Zoma 30 Oktobra 2020
You are here: Home › Dihin’ny Varika Maneran-tany: Zoma 30 Oktobra 2020 › Ireo daty sy toerana misy ny fankalazana
Mankalazà ny fitiavana ny fiarovana ny varika mandritra ny volana Oktobra mandritran’ny fankalazana ny andron’ny varika maneran-tany, Zoma faha 30 Oktobra 2020 !
Maro ireo fankalazana sy hetsika izay mety voatery atao virtoaly na hetsika tsy mivantana noho ny fisian’ny valan’aretina COVID-19. Na izany aza anefa dia manantena izahay fa hisy ihany ireo hetsika mivantana ho tanterahina eto Madagasikara mandritra ny volana Oktobra sy Novambra.
Mandefasa mailaka aminay ahafahanay manoratra ny daty sy toerana misy fankalazana fantatrao.
Jereo ny toro-lalana ho an’ny fankalazana tsy mivantana na virtoaly nefa azo tanterahina mivantana ihany koa.
Jereo eto ny toro-lalana ho an’ny fankalazana eny amin’ny tambazotra sosialy
Hetsika sy fankalazana tsy mivantana na virtoaly
Mandefasa mailaka amin’ny adiresy lemurconservationnetwork@gmail.com raha hamandrika toerana ka hahazo ny rohy zoom hanantanterahina ny valan-dresaka. Izany dia alefa amin’ny Facebook Live sy YouTube.
25 Oktobra @ 11 ora alina (ora Madagasikara): Fifaninana iarahana amin’i Susie Louis avy amin’ny Conservation Fusion sy Jessica Deville avy amin’ny Louisiana Lemur Foundation ( Facebook event)
28 Oktobra @ 4 ora hariva (ora Madagasikara): Valan-dresaka miaraka amin’ireo mpiantsehatra amin’ny fiarovana mikasika ny asa fiarovana sy ny fanantenana amin’izany eto Madagasikara ( Facebook event)
29 Oktobra @4 ora hariva (Ora Madagasikara): Fizarana ataon’ireo mpisera-dia matihanina momba ny fitsidihana an’i Madagasikara ( Facebook Event)
30 Oktobra : Facebook Live any Smithsonian National Zoo
October 30, 2020, Virtual Gala: Fampisehona ny horonan-tsary hoe: Me and You and Zoboomafoo! Tsy andoavam-bola ny fijerana azy io.
19 Oktobra, asa-tanana: Juried art exhibition (farafandefasana ny asa-tanana ny 30 Septambra amin’ny 05 ora EST); valan-dresaka mikasika ny fiarovana sy talenta ary asa-tanana manodidina izany miaraka amin’i Penelope Bodry-Sanders
20 Oktobra sy mandritra ny herinandro: “World Lemur Festival Digital Escape Room”
21 Oktobra, Asa-tanana mikasika ny fiarovana
22 Oktobra, mikasika ny varika: valan-dresaka iarahana amin’ireo mpikaroka momba ny varika amin’ny 02 ora hariva EST
23 Oktobra “Lemur Trivia Night” amin’ny 7 ora hariva EST
Mahery (Madagascar Health and Environmental Research)
Famelabelarana mivantanana ao amin’ny pejy Facebook an’ny Mahery : “Fiompiana Akoho Gasy : Vahaolana Hiarovana ny varika” miaraka amin’ny Dr Ando Ravelomanantsoa Miharifetra, ny Alahady 01 Novambra 2020 @ 3ora hatramin’ny 4 ora hariva (ora eto Madagasikara)
Fanentanana eo amin’ny pejy facebook mba handefasan’ny rehetra ny sariny miaraka amin’ny hafatra izay tiana ho soratana ho fankalazana ny andron’ny varika. Tokony alefa mialoha ny Alakamisy 29 Oktobra 2020 ny sary.
LEEP, Oniversite any Arizona ary Reid Park Zoo
30 Oktobra: Resaka iarahana amin’i Dr. Tecot sy ireo mpiara-miasa aminy momba ny asa fiarovana ny varika miainga any amin’ny fahibibi-dia ka any any ifotony.
Lalao momban’ny varika, jereo eto
Ao amin’ny rohy misy ny Learning apps ihany koa ny lalao.
Planet Madagascar miaraka amin’ny Toronto Zoo
Fitsidihana ny maky any Toronto Zoo; fanontaniana sy valiny miaraka amin’ny Talen’ny Planet Madagascar avy aty Madagasikara; fitsidihana ny ala any North Carolina’s Duke Lemur Center; resaka momba ny fiarovana ny varika miaraka amin’ireo mpikaroka; ary mpanoratra sy mpiantsehatra amin’ny fiarovana hiresaka momba ny fitsidihana nataony tany Madagasikara.
Resaka alefa YouTube sy Facebook
Jereo eto ny andinidiny Planet Madagascar’s Facebook page
Spanish Primatological Society
30 Oktobra: resaka virtoaly momba ny asa fiarovana ny varika sy ny fiaraha-miasa ao anatin’ny tetikasa Agua de Coco project from Madagascar (https://aguadecoco.org/que-hacemos/madagascar/).
Resaka virtoaly iarahana amin’ireo mpikaroka. Ho avy tsy ho ela ny andinidiny.
Hetsika any ivelan’i Madagasikara
Hetsika any Etazonia
Leesburg Animal Park, Leesburg, Virginia
Faran’ny volana Septambra ka hatramin’ny faha 03 Novambra: Hetsika sy kilalao isan-karazany, fifaninana sarin’ireo varika!
Staten Island Zoo, New York
28 Oktobra (12pm-3pm EST): Resaka iarahana amin’ireo mpikarakara ny varika, fiofanana kely, resaka momba ny asa fiarovana ny varika
Cape May Zoo, New Jersey
26 Okobtra (10am-2pm EST): Hetsika virtoaly sy live miaraka amin’ireo mpikarakara; hetsika maro ao amin’ny Facebook
Desambra 2020: Podcast iarahana amin’ny Centre ValBio momba ny asa fiarovana eto Madagasikara
Hetsika virtoaly, ho avy tsy ho ela ny andinidiny (See Facebook)
Hetsika any Europa sy Angletera
Hoo Farm, Shropshire, UK
24 ka hatramin’ny 30 Oktobra: Fitsidihana ny ala misy ireo varika, fifaninana sy resadresaka momba ny varika. Tsy andoavam-bola ho an’ireo avy amin’ny armed forces, NHS, police ary fire services.
Peak Wildlife Park, Staffordshire, UK
30 Oktobra: Ho avy tsy ho ela ny andinidiny
South Lakes Safari Zoo, Cumbria, UK
24 Oktobra: Resaka iarahana amin’ireo mpikarakara ny varika. Amin’ny fiafaran’ny fotoana dia hisy fampisehoana ireo karazan-tsakafo malagasy. Ho an’ny mpikambana ihany. Jereo eto ny tickets https://www.eventbrite.co.uk/e/festival-of-lemurs-tickets-119783799569
Combe Martin Wildlife Park, Ilfracrombe, UK
25 Okotobra- 1 Novambra: mandritra ny fankalazana ny Halloween dia hankalazaina ihany koa ny andron’ny varika maneran-tany.
Fanangonam-bola ho an’ny Lemur Love
Hetsika any Asia
Chengdu Foreign Languages School, China, UN17 Goals
30 Oktobra: Fanangonam-bola ho an’ny LCN
7 Novambra: Fampisehoana iarahana amin’ny New Art Exhibition Association
25-30 Oktobra: Fampahafantarana ho ataon’ireo mpitsidika ary hisy ihany koa hetsika amin’ny tambazotra sosialy.
Hetsika eto Madagasikara
Ranomafana, Centre Valbio
Daty : Zoma 30 Oktobra 2020
Hetsika ho tanterahina : Fijerena horonantsary mihetsika eo amin’ny lapan’ny tanan’i Ranomafana, kilalao iarahana amin’ny ankizy, fifaninana maro samihafa.
Kianjavato, Conservation Fusion
Daty: 23 Oktobra 2020
Hetsika iarahana amin’ireo mponina ifotony antsoina hoe ‘Conservation Camp” ary “reforestation with Star Club”
Sainte Luce, SEED Madagascar
Daty : Ambara manaraka eto ny daty
Hetsika : fampisehoana horonan-tsary notanterahin’i David Attenborough atao eny an-tsekoly, biraon’ny fokontany. Hisy ny fanasana ireo mpiantsehatra amin’ny fiarovana, ireo tompon-tany ary solotena avy amin’ny DREDD. Hisy ihany ny fambolen-kazo ao amin’ny tandavan’ala ary fanentanana maro.
Manerana an’i Madagasikara, Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy
Ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy dia hanantanteraka ny fankalazana ny andron’ny varika, hetsika izay iarahany amin’ireo fikambanana miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana ary ireo mpiara miombon’antoka misehatra amin’ny fiarovana ny varika sy ny ala fonenany.
Hetsika ho tanterahina : Resadresaka atao amin’ny fahitalavitra miaraka amin’ny MEDD sy ny GERP ary mpisehatra amin’ny fiarovana ny varika hafa.
Antananarivo, Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza
Hetsika ho tanterahina : « Kamishibai » momban’ny Varecia variegata subsincta sy ny Lemur catta ary fampirantiana momban’ny varika.
Antananarivo-Antananinarenina, Federation Nationale des Guides
Hetsika ho tanterahina: Fampirantiana sarin’ny varika, arahina fanazavana ataon’ireo mpitari-dia
Fandraisana anjara eny amin’ny tambazotra sosialy
Maro ireo fikambanana no mandray anjara amin’ny fankalazana ny andron’ny varika maneran-tany amin’ny alalan’ny hetsika sy fanentanana maro samihafa eny amin’ny tambazotra sosialy toy ny Facebook. Misy ireo posters, ireo facebook Live, fanentanana amin’ny alalàn’ny fandefasana horonan-tsary.
Smithsonian National Zoo, Washington, DC
Bramble Park Zoo, Watertown, South Dakota
Ringling College of Art and Design, Florida
Manor House Wildlife Park, UK
Banham Zoo, UK
Africa Alive, UK
Reaseheath Mini Zoo, Cheshire, UK
Mifandraisa aminay raha toa maniry hampahafantatra ny hetsika ho tanterahin’ny fikambanana misy anao ianao ka alefaso aminay izay vaovao, sary na horonan-tsary ho fampahafantarana rehetra.
Ndeha hiara-hientana ho an’ny varika: hianatra, hizara ary handray andraikitra miaraka!